Pinotage - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
I-Pinotage iyinhlobonhlobo yewayini elibomvu elivela eNingizimu Afrika. Ikhulile futhi, naphezu kokuncane, e-Australia, eBrazil, eCanada, e-Israel, eNew Zealand, eSwitzerland, e-United States naseZimbabwe.
UProfesa Abraham Izak Perold waseNyunivesithi yaseStellenbosch wakha iPinotage phakathi neminyaka ye-1920, ngokusebenzisa impova yokuphambana kukaPinot noir noCinsaut (owayaziwa ngokuthi iHermitage). U-Perold usolwa ngokufuna ukudala amagilebhisi nge ukunambitheka kwe-Classic Pinot kanye nezici ezilula zokukhula ze-Cinsaut.
Isiphambano saveza imbewu emine, uPerold etshale ensimini yokuhlala kwakhe esemthethweni eSpenenbosch University ePalgevallen epulazini lokuhlola. U-Perold eminyakeni emibili kamuva wabe esesimweni se-KWV, okwaholela ekutheni indawo yokuhlala yaseWelgevallen ingabanjwanga isikhathi eside. Izwi linalo lokuthi uDkt Charlie Niehaus, owayesengumfundisi osemusha, wasindisa izithombo ezivela eqenjini elithunyelwe ekuhlanzeni insimu, okwakube yenzeke kakhulu.
U-Niehaus wanika uProfesa CJ Theron izithombo, owahola uMnyango we-Viticulture neViniculture eSyunivesithi yaseStellenbosch ngawo-1940 no-1950. Imivini yasungulwa kabusha e-nursery e-Elsenburg Agricultural College futhi yahlanganiswa kamuva ku-Richter 99 no-Richter 57 rootstocks, okwakungenye inhlanhla yenhlanhla, njengoba izimpande ezindala ezahlukahlukene zabe seziphethwe yizifo ezithathelwanayo okufanele zibhujiswe.
I-graft engcono kakhulu ekhethiwe ikhethiwe ukuba ibe impahla yomama yazo yonke imivini ye-Pinotage.
Ukudlulela ekuqaleni kwabizwa ngokuthi "iHermitage" iHermitage x Pinot "futhi kuthiwa igama elithi Herminoire lacatshangwa ngokujulile. Igama elithi Pinotage kuthiwa lihlezi lapho u-Theron ebonisa imivini emine ehlanganisiwe eya ePerold.
Imivini yokuqala yokuhweba yayitshalwe eMyrtle Cove ngaseSir Lowry's Pass noma iMuratie eStellenbosch. Lezi zinhlobo zathatha isikhashana ukugxila embonini, nabalimi abathathu kuphela ababenayo emapulazini abo ngawo-1950.
Lo mlimi wathola ukuthandwa ngemuva kokuwina isihloko sewayini elihle kwiCape Young Wine Show ngo-1959 no-1961. Winery Winery Winery waba ngowokuqala ukusebenzisa igama elithi Pinotage kulebula ngo-1961, ukudayisa umqashi we-1959 uPinetage of Bellevue Estate ngaphansi uphawu lwe-Lanzerac.
Northern Cape, Olifants River, Swartland, Klein Karoo, Paarl, Robertson, Stellenbosch, Worcester, Breedekloof naseCape South Coast.
I-cultivar inezilinganiso ezilinganayo ukuze ibe namandla, ngenzuzo yokukhiqiza ka-10t/ha kuya ku-15t/ha.
Kuyinto ezihlukahlukene zakuqala ezivuthwa kusukela engxenyeni yesibili kaFebhuwari.
Amajikijolo amancane, ama-oval ahlotshaniswa nombala omnyama okwesibhakabhaka omnyama uma evuthiwe. Isikhumba sinyene futhi sinamathele, kuyilapho inyama iyithambile futhi inomsoco.
Amahlmvy akhona aphakathi nendawo ngobu nkulu, iluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu neyisihlanu.
Izinhlobonhlobo azitholakalanga kakhulu ne-powdery isikhutha, kepha ziphikisana kakhulu ne-botrytis kuneCabernet Sauvignon. Izinkinga eziningi ziyaphunywa yiqiniso lokuthi iPinotage ivuthwe ekuqaleni kwenkathi.
I-pinotage ingasetshenziswa njenge-varietal eyodwa noma ihlanganiswe neminye imivini. Isibonelo esisodwa, yiCape Blend, echazwa njengomhlanganisi obomvu waseNingizimu Afrika oqukethe okungenani ama-30%, kodwa angabi ngaphezu kwe-70% Pinotage.
Kungenziwa zibe izindlela ezehlukene zewayini, kuye ngokuthi indlela yakhula ngayo futhi ikhula. Ukunqwabelana kwezimpande eziyi-Richter eziyi-110 ezitshalwe emajubeni angasentshonalanga, kungase kuvelise ukunambitheka kwamabhanana okuhlukene, kuyilapho imithambeka yasempumalanga enomhlabathi ojulile ingaveza izithelo ezimnyama ze-cherry, kanye namaqhinga esikhumba ne-tar. Ukusebenzisa ngokuhlakanipha kwe-oki, kunganika i-Pinotage i-chocolate noma i-twist.